CCAA : « Ankizy 13 taona efa mifoka rongony » | NewsMada
CCAA : « Ankizy 13 taona efa mifoka rongony »
Par Taratra sur 04/03/2016
10 taona ny centre de cure Aro aina Andravoahangy manampy ny olona te hiala amin’ny fiankian-doha amin’ny toaka sy sigara ary ny zava-mahadomelina (rongony). 2 460 ny olona tonga nanatona sy noraisina an-tanana tao anatin’izay fotoana izay. Nandritra ny dimy taona faharoa no nitombo be ny isan’ny lehilahy sy vehivavy nila fanampiana amin’ny fialana amin’ny toaka, sigara sy rongony. « Momba ny rongony manokana, 73%-n’ny olona nanatona ny ivontoerana ankizy eo amin’ny 15 ka hatramin’ny 20 taona avokoa. Tato ho ato, midina ho 13 taona izany », hoy ny mpiandraikitra ny CCAA, Andriamarinarivo Miarintsoa, omaly teny amin’ny foiben-toerany, Andravoahangy. 27% kosa ny tanora mihoatra ny 25 taona. 2% amin’ireo indray vehivavy avokoa izay matetika manana olana amin’ny fianakaviana sy amin’ny asa.
Olona tsy anasa ny 28% satria mampikorontana saina ny rongony ka tsy ahafahana manao zavatra iray, mpianatra eny amin’ny ambaratonga fahatelo (kilasy 2nde-famaranana) ny 72% . Entin’ny ray aman-dreny eny amin’ny ivontoerana izy ireo haka torohevitra sy hotsaboina hiala amin’ny rongony. Matetika koa, voasazy avy any am-pianarana fa nahatrarana rongony tany aminy. Farany, mety ho nisehoan’ny olana ara-tsaina ka mila fanampiana. Mifoka miaraka amin’ny namana ny 76%-n’ny olona nanontaniana tonga eny amin’ny foibe, 24% kosa mandray zava-mahadomelina irery. Ny mpifoka na mpidoroka 71 amin’ny 100 mandray rongony intelo isan’andro ; 22%, mihoatra ny inefatra isan’andro, 7% indray mandeha isan’andro. Fambara hamantarana ny olona mpifoka ny fanaovana herisetra, tsy voafehy mihitsy izy amin’ny fiainana andavanandro sady kamo na dia hidio fotsiny aza. Mety ho mampiseho fikorontanana ara-tsaina koa ilay olona. Antony mampirongatra ny fandraisan’ny ankizy ny rongony, amin’izao fotoana izao, ny fisarihan’ny namana eny amin’ny fiarahamonina, na any an-dakilasy. Amidy eny amin’ny toerana rehetra ny rongony hatreny amin’ny faritra manakaiky ny EPP mihitsy aza ny sasany.
Miverina amin’ny fiankinan-doha ny 15%-n’ny olona
Amin’ny ankapobeny, 15%-n’ny olona tonga hiala sigara, toaka na rongony, miverina amin’ny fiankinan-doha indray aty aoriana rehefa afaka tanteraka. Antony voalohany, tsy sitrapony no hiala amin’ny fiankinan-doha fa noterana fotsiny; faharoa, tsy ampy tohana ara-tsaina avy amin’ny fianakaviany izy. Farany, tsy manana zavatra na asa handaniany ny fotoana mandritra ny tontolo androny ny tenany.